किटाणुहरू जनावरबाट सर्ने गर्छन यसमा कुकुर पनि पर्दछ:घरमा कुकुर पाल्नुभएको छ? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
किटाणुहरू जनावरबाट सर्ने गर्छन यसमा कुकुर पनि पर्दछ:घरमा कुकुर पाल्नुभएको छ?
कतिपय मानिसहरूलाई घरमा जनावर पाल्ने शोख हुन्छ। कतिले आफ्नो शोख पुरा घरमा कुकुर, विरालो, मुसा, चरा, इत्यादी पालेका हुन्छन्। तर कार्निभोर मांसाहारी जनावर पाल्दा मानिसलाई रोग सर्ने सम्भावना बढि रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
सार्स–कोभ–२ ९कोभिड–१९० तथा साल्मोनेला नामक रोगहरू मानिस भन्दा पहिले जनावरमा सर्ने गर्दछ। जनावबाट यसले रूप परिवर्तन गरेर मानिसमा सारेको अध्ययनमा उल्ललेख छ।
त्यस्ता जनावरले जुनोटिक प्याथोजिनहरू किन बोकेका हुन्छन्रु भन्ने तथ्य हालसम्म पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन। तर वैज्ञानिकहरुको अनुमानका अनुसार जनावरहरुमा छुट्टै खालका इम्युन सिस्टम हुन्छन्। यि जनावरूले प्राकृतिक रुपमै यस्ता भाइरस र ब्याक्टेरिया बोकेका हुन्छन्।
जुनोटिक प्याथोजिनहरूले कार्निभोर जनावरहरूमा कस्तो व्यवहार देखाउँछ भनेर पत्ता लगाउन सके मानिसमा सर्नबाट जोगाउन सकिने वैज्ञानिकहरुको भनाई छ।
‘जनावरहरुमा किटाणुबाट बचाउने जीन नै नरहेको पत्ता लगाएका छौं,’ विश्व विद्यालयका भेटनरी मेडिसिन विभागका प्रमुख प्राडाक्लेर ब्रायन्टले बताए।